Akụkọ - Otu esi ahazi Igbe Na-adọrọ adọrọ
Otu esi echepụta igbe na-adọrọ adọrọ
Nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe nchebe maka ngwaahịa dị n'ime, agbanyeghị, yana mmepe nke akụ na ụba ụwa, nkwakọ ngwaahịa ga-agbakwunye uru ọzọ. Iguzo na ahia nke ndi ahia taa, ikwesiri iru “wow wow”, nke n’eme ka ihe nkwakọ ngwaahịa di nnukwu mkpa.
Mana otu esi emepụta igbe nkwakọ ngwaahịa mara mma?
Nke mbu, anyi aghaghi ichoputa ihe ichoro igosiputa, ihe bu isi nke ngwa ahia gi. Kedu uru gị bara na ụdị ngwaahịa ahụ na ahịa. Mgbe ahụ ịmara otu ị chọrọ ka ọ dị.
Nke abụọ, ị ghaghị ịkọwapụta nke ọma ndị bụ ndị na-ege gị ntị? Ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ agbọghọ, wee mee ka imewe ahụ dị jụụ ma doo anya. Ọ bụrụ na ọ nwere ihe ịga nke ọma n'etiti-nwoke, mgbe ahụ na-eme ka imewe ahụ dị mma n'anya ma mara.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ ụdị igbe, ihe na ọrụ aka. Nke a na-agagharị na mpaghara ọkachamara. Can nwere ike ma chọta gị onwe gị imewe otu ime ya, ma ọ bụ na-enye anyị a n'ozuzu echiche / echiche, anyị nwere ike inyere ndị ọzọ.